मसला—बाइबलकालीन समयमा राजालाई दिन योग्य उपहार
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डेनिश तोक पिसिन तोतोनक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुभेल शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
“पूर्वबाट ज्योतिषीहरू यरूशलेम आए . . . उनीहरूले आफ्नो कन्तुरबाट सुन, सेतो धूप र मर्र झिकेर उहाँलाई उपहार चढाए।”—मत्ती २:१, ११.
कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई तपाईं कस्तो उपहार दिन चाहनुहुन्छ? बाइबलकालीन समयमा कुनै-कुनै मसला सुन जतिकै बहुमूल्य हुन्थ्यो। ती मसला राजालाई उपहार समेत दिन योग्यको ठानिन्थ्यो। * त्यसैले ज्योतिषीहरूले “यहूदीहरूका राजा”-को लागि भनेर ल्याएका उपहारमध्ये दुईवटा चाहिं सुगन्धित मसलाहरू थिए।—मत्ती २:१, २, ११.
शबाकी रानीले सुलेमानसित भेट्न आएको विवरणबारे बाइबलमा यसो लेखिएको छ: “तिनले राजालाई एक सय बीस तोडा सुन, प्रशस्त मात्रामा मसला र बहुमूल्य रत्नहरू चढाइन्‌। सुलेमान राजालाई शबाकी रानीले दिएको बराबर कुनै मसलाहरू कहिल्यै आएको थिएन।” (२ इतिहास ९:९) अरू राजाहरूले पनि सुलेमानसित सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न मसलाहरू पठाएका थिए।—२ इतिहास ९:२३, २४.
बाइबलकालीन समयमा मसलाहरू किन त्यति बहुमूल्य र महँगो हुन्थ्यो? किनकि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कामकाजको लागि यसको प्रयोग हुन्थ्यो, जस्तै सौन्दर्य, धार्मिक क्रियाकलाप अनि लास गाड्ने बेलामा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। (“ बाइबलकालीन समयमा सुगन्धित मसलाको प्रयोग” भन्ने पेटी हेर्नुहोस्) मसला महँगो हुनुको अर्को कारण यसको माग अनि ढुवानी खर्च धेरै भएकोले हो।
अरबी मरुभूमि पार गर्नुपर्ने
बाइबलकालीन समयमा केही मसला यर्दनको बेसीमा पाइन्थ्यो तर अरू चाहिं अन्य ठाउँहरूबाट ल्याउनुपर्थ्यो। बाइबलमा विभिन्न प्रकारका मसलाबारे चर्चा गरिएका छन्‌, जस्तै केशर, घिउकुमारी, तिउरी, दालचिनी, सेतो धूप, मर्र, आदि। साथै जीरा, पुदिना र सुप जस्ता खानामा हाल्ने मसला पनि त्यतिखेर सामान्य थियो।
यी विशेष मसलाहरू कहाँबाट ल्याइन्थ्यो? घिउकुमारी, क्यासिया (जङ्गली दालचिनी) र दालचिनी जस्ता मसला चीन, भारत र श्रीलङ्कामा पाइन्थ्यो। मर्र र सेतो धूप चाहिं अफ्रिकाको दक्षिण अरबदेखि सोमालियासम्मको मरुभूमिमा पाइन्थ्यो। अनि जटामसी भारतको हिमाली क्षेत्रमा पाइन्थ्यो।
यी मसलाहरूलाई अरबको भूभाग हुँदै इस्राएलसम्म ल्याइन्थ्यो। मसलासम्बन्धी एउटा किताब द बुक अफ स्पाइसेज का अनुसार ईसापूर्व दोस्रो र प्रथम शताब्दीमा अरब देश “पूर्व र पश्‍चिमबीच मसला ढुवानी गर्ने मुख्य देश बन्यो।” दक्षिण इस्राएलको नेगेवमा भेट्टाइएका पुरातन सहरहरू, किल्लाहरू र यात्रु बिसौनीहरूले त्यतिबेलाका मसला व्यापारीहरूले कुन बाटो प्रयोग गर्थे भन्ने कुरा देखिन्छ। युनेस्को विश्व सम्पदाका अनुसार “यी बस्तीहरूले दक्षिण अरबदेखि भूमध्यसागरसम्मै मसला व्यापार निकै फस्टाएको थियो भनेर प्रस्टै देखाउँछ।”
“मसलाको माग धेरै, मात्रा थोरै र महँगो थियो। तैपनि व्यापारजगतमा निकै लोकप्रिय थियो।”—द बुक अफ स्पाइसेज
यी सुगन्धित मसलाहरू लिएर यात्रीदलहरू अरबबाट लगभग १८०० किलोमिटर नियमित रूपमा यात्रा गर्थे। (अय्यूब ६:१९) बाइबलमा पनि इश्माएली व्यापारीहरूले गिलियाददेखि मिश्रदेशसम्म “सुगन्धित धूप, सुगिन्धत लेप, मर्र” जस्ता मसलाहरू लगेको कुराबारे बताइएको छ। (उत्पत्ति ३७:२५) याकूबका छोराहरूले आफ्नो भाइलाई यस्तै व्यापारीहरूको हातमा बेचिदिएका थिए।
“मसला व्यापारीहरूले राखेको गोप्य कुरा”
थुप्रै शताब्दीसम्म मसलाको व्यापार अरबी व्यापारीहरूले मात्रै गरे। तिनीहरूले त्यतिखेर एसियाबाट दालचीनी र क्यासिया जस्ता मसलाहरूको आपूर्ति गर्थे। भूमध्यसागरका देशहरूले पूर्वका देशहरूसित सीधै व्यापार नगरोस् भनेर अरबीहरूले काल्पनिक कथाहरू फैलाएर मसला पाउन निकै जोखिमपूर्ण छ भन्ने भान पारेका थिए। द बुक अफ स्पाइसेज किताबअनुसार मसलाको वास्तविक स्रोत नखुलाउनु नै “मसला व्यापारीहरूले राखेको गोप्य कुरा” थियो।
अरबीहरूले कस्ता कथाहरू फैलाएका थिए? डरलाग्दा चराहरूले पहरोमा दालचिनीको रूखको बोक्राबाट गुँड बनाएका कथाबारे ईसापूर्व पाँचौ शताब्दीका ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटसले उल्लेख गरे। यो बहुमूल्य मसला जम्मा गर्नेहरूले पहरोको तलपट्टि ठूलठूला मासुका टुक्राहरू राख्थे भनेर तिनले लेखे। अनि चराहरूले ती ठूलठूला मासुका चोक्टा आफ्नो गुँडमा लैजान्थे। मासुको भार थाम्न नसकेर गुँड भुइँमा खस्थ्यो। अनि मानिसहरू तुरुन्तै आएर दालचिनी जम्मा गरेर व्यापारीहरूलाई बेच्थे। यस्ता काल्पनिक कथा चारैतिर फैलिएको थियो। द बुक अफ स्पाइसेज किताबमा यस्तो लेखिएको पाइन्छ: “दालचिनी जम्मा गर्न जोखिमपूर्ण छ भन्ने तथाकथित कुराहरूले गर्दा यो मसला चर्को मूल्यमा बेचिन्थ्यो।”
तर पछि अरबीहरूको रहस्य खुल्यो र तिनीहरूले गरिरहेको एकलौटी व्यापार अरूले पनि गर्न थाले। ईसापूर्व प्रथम शताब्दीमा मिश्रको अलेक्जेन्ड्रिया मसला ल्याइने ठूलो बन्दरगाह बन्यो। साथै यो ठाउँ मसलाको व्यापार गरिने मुख्य केन्द्र भयो। झरीको समयमा हिन्द महासागरमा चल्ने हावाकोफाइदा उठाउँदै रोमीहरूले आफ्ना जहाज मिश्रको बन्दरगाहदेखि भारत पुऱ्याउँथे। यसरी बहुमूल्य मसलाहरू छ्यास्छयास्ती पाउन थालेकोले यसको मूल्य पनि घट्यो।
अहिले मसलाको मूल्य सुनसित त तुलना गर्न सकिंदैन। साथै राजालाई दिइने उपहारको रूपमा पनि योग्य ठानिदैन। तर संसारभरिका लाखौं मानिसहरूले मसलाहरूलाई अत्तर अनि औषधीको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्‌। साथै खानालाई स्वादिलो बनाउन पनि प्रयोग गर्छन्‌। हजारौं वर्षअघि जस्तै आज पनि मसला यसको सुगन्धले गर्दा विश्वभरि प्रख्यात छ।
^ अनु.3बाइबलमा “मसला” वा “मसलाहरू” भनेर अनुवाद गरिएको मौलिक शब्दले खानालाई स्वादिलो पार्ने मसला नभई मुख्यतः रूखबिरुवाबाट बनाइने सुगन्धित अत्तरलाई बुझाउँछ।
बाइबलकालीन समयमा सुगन्धित मसलाको प्रयोग
अभिषेक गरिने तेल र पवित्र धूपका लागि। यहोवा परमेश्वरले मोशालाई अभिषेक गरिने तेल वा लेप र पवित्र धूप कसरी बनाउने भनेर निर्देशन दिनुभयो। (प्रस्थान ३०:२२-२५, ३४-३८) केही पुजारीहरूले यो तेल बनाउने विशेष जिम्मा पाएका हुन्थे अनि यसको वितरण गर्ने कामको रेखदेख गर्थे।—गन्ती ४:१६; १ इतिहास ९:३०.
अत्तर र मलमहरूका लागि। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो घर, लुगा, डस्ना र शरीरलाई बास्नादार बनाउन सुगन्धित पाउडर प्रयोग गर्थे। (एस्तर २:१२; हितोपदेश ७:१७; श्रेष्ठगीत ३:६, ७; ४:१३, १४) लाजरसकी दिदी मरियमले “असाध्यै महँगो सुगन्धित जटामसीको तेल” येशूको शिर र पाउमा दलिदिइन्‌। ‘सक्कली जटामसीको तेल’ यति महँगो थियो कि यसको एउटा सानो भाँडोको मोल पनि एक वर्षको ज्याला बराबर थियो।—मर्कूस १४:३-५; यूहन्ना १२:३-५.
शव गाड्नुअघि गरिने तयारीमा। येशूको शव गाड्न गरिएको तयारीमा निकोदेमसले ‘मर्र अनि अगरु अर्थात्‌ घिउकुमारी’ ल्याएका थिए। (यूहन्ना १९:३९, ४०) साथै येशूका केही चेलाहरूले “सुगन्धित मसला र तेल” तयार पारेर चिहानमा लगेका थिए।—लूका २३:५६–२४:१.
खानामा। इस्राएलीहरूले माछामासुलाई स्वादिलो बनाउन मसलाहरूको प्रयोग गर्थे। साथै दाखमद्यलाई कडा बनाउन पनि थुप्रै मसलाको प्रयोग गरिन्थ्यो।—श्रेष्ठगीत ८:२.
येशूलाई उपहार स्वरूप दिइएको दुई किसिमका मसला
सेतो धूप र मर्र दुवै स-साना रूख वा काँडाको झाडीबाट प्राप्त गरिने चोपबाट बनाइन्छ।
सेतो धूपको रूख अरबको दक्षिण समुद्री किनारमा पाइन्थ्यो अनि मर्रको झाडी चाहिं सोमालिया र यमन देशमा पाइन्थ्यो। यी मसलाहरूलाई मानिसहरूले निकै मनपराउनुको कारण यिनीहरूको मीठो बास्नाले गर्दा हो। यहोवा परमेश्वरको उपासना गर्दा यी मसलाहरूको प्रयोग गर्ने निर्देशन उहाँले इस्राएलीहरूलाई दिनुभयो। अभिषेक गरिने पवित्र तेलमा मर्रको प्रयोग गरिन्थ्यो र पवित्र धूप चाहिं सेतो धूपबाट बनाइन्थ्यो। (प्रस्थान ३०:२३-२५, ३४-३७) यी मसलाहरूको प्रयोग छुट्टाछुट्टै किसिमले गरिन्थ्यो।
सेतो धूपलाई मीठो बास्नाको लागि बालिन्थ्यो। तर मर्र चाहिं सीधै प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। येशू सम्बन्धी बाइबल विवरणमा मर्रको तीन पटक चर्चा गरिएको पाउँछौं: (१) येशू बालकै हुनुहुँदा उहाँको लागि उपहार स्वरूप मर्र ल्याइएको थियो। (मत्ती २:११) (२) यातनाको खम्बामा झुन्ड्याइँदा उहाँको दुखाई कम गराउन मर्र मिसाइएको दाखमद्यमा दिइएको थियो। (मर्कूस १५:२३) (३) उहाँको लास गाड्ने तयारी गरिंदा मर्रको प्रयोग गरिएको थियो। (यूहन्ना १९:३९)
इस्राएलीहरू राजाको माग गर्छन्‌
इस्राएलीहरूले राजाको माग गर्दा यहोवाले शाऊललाई छान्नुभयो। यहोवाले किन शाऊलको सट्टा दाऊदलाई रोज्नुभयो?